Hardware Zvikamu Kugadziriswa - K-Tek Machining Co, Ltd.
K-Tek machine Co., Ltd. iri muChina. Kambani yedu inogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, parizvino tine vashandi mazana maviri. Zvigadzirwa zvedu zvinosvika makumi maviri kubva muzana zvinotumirwa kuJapan, 60% inotumirwa kuEurope neAmerica, tinogona kukupa yakakwira mhando uye mutengo wekukwikwidza.
CNC hwokugaya hwakabvira:
CNC hwokugaya hwakadhura inoshanda mhinduro yekugadzirisa zvikamu zvine maumbirwo akaomarara uye / kana kushivirira kwakasimba, kunyanya kune epasi vhoriyamu mapurojekiti. CNC chaiyo yekugaya inogona kuburitsa chero chimiro chero icho iko iko kunowanikwa neanotenderera ekucheka maturusi. Zvakare, kana iwe uine zvinhu zvisina kutenderera kana mativi uye uine yakasarudzika kana yakaoma chimiro, tinogona kubatsira. Tiine inhouse tsika fixturing kugona, isu dzidzira mu nemazvo azvikuya uye nemazvo machine yeakaoma-kubata, zvakaoma-ku-gadzira castings, forgings uye nezvimwe simbi zvinoriumba.
K-Tek inopa akati wandei chaiwo CNC ekushandura masevhisi kune akasiyana maindasitiri uye mashandisiro. Kutendeuka maitiro kunosanganisira kucheka, kutarisana, kuseta, kuumba, kuchera, kurovera, uye kufinha. Tinogona kushanda nesimbi, isina tsvina, ndarira, ndarira, mhangura, simbi, nickel, tini, titanium, Inconel nezvimwe. Tinogona zvakare muchina mapurasitiki seABS, Polycarbonate, PVC, uye PTFE. Basa zvidimbu zvidimbu zvinobva pasi pe1 "dhayamita kusvika gumi" dhayamita, uye kusvika kusvika gumi nemaviri "pakureba, zvichienderana nechikamu chikamu. Thru huremu hwekubereka mumatanda hwasvika pa3 ”dhayamita.
Mashanu-akabatana machining anotibvumidza kufambisa yekushandira pamwe nematanho mashanu akasiyana panguva imwe chete. Izvi zvinopa machining akajeka ezvikamu zvakaomarara uye kugona kudonhedza-kubvisa zvinhu zvakawanda zvakakwana… nokudaro zvichiita kuti kushandiswa kweiyi tekinoroji yepamberi kuve kwakachengetedza zvakanyanya. Mashanu-akabatana CNC machine uye mashanu mativi azvikuya zvakare rakanakira kuzadzisa wakanaka pamusoro apedzerazve kuwedzera kudiwa vatengi vedu.
Waya yemagetsi kuburitsa machining (EDM) inyanzvi chaiyo yekucheka chero chero chinhu chemagetsi chinoitisa zvinhu. Tambo yakatetepa, ine magetsi-yakachinjirwa waya yeEDM yakamisikidzwa pakati pemaviri magineti maumbirwo anoita imwe electrode, nepo icho chinhu chiri kutemwa chichiumba imwe electrode. Kubuditswa kwemagetsi pakati pemaviri ma electrode (iyo waya & iyo yekushandira) inogadzira marimi anodimbura zvinhu. Nekuti iyo tambo yakachaji haimbonane neyekushandira muEDM machining maitiro aya anogona kushandiswa kugadzira zvidiki zvidiki uye zvakapfava zvikamu zvinoda mazinga ekurongeka uye kuomarara ayo echinyakare machining asingakwanise kuwana.